Madaxweyne Xasan oo sheegay 'arrin dhif iyo naadir ah' oo ay tahay in looga daysado Rooble - Idman news
Madaxweyne Xasan oo sheegay ‘arrin dhif iyo naadir ah’ oo ay tahay in looga daysado Rooble
Mohamoud 1 month ago 2 min read
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si weyn ugu bogaadiyay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble dhameystirka doorashada oo uu kala soo dabaashay caqabado hor leh.
Madaxweyne Xasan ayaa sheegay in bulshada Soomaaliyeed ay abaal uga hayso Ra’iisul Wasaare Rooble howsha uu qabtay oo aysan dan gaar ah ugu jirin, islamarkaana ay tahay in looga daydo tallaabadaas naf hurida ah ee dalka bad-baadisay.
“Ra’iisul Wasaare Rooble waxaa leeyahay Allaha ajar iyo xasanaad ha ka siiyo, magac iyo karaamo ku muteyso doorasho ayuu sameeyay aysan dan ugu jirin oo isaga uu muraad ka laheyn, maanta waxa uu diyaar u yahay in muwaadin Soomaaliyeed inuu dadkiisa sharaf iyo karaamo ku dhex noolaado inuu noqdo,” ayuu yiri.
“Waa tusaale mudan in lagu daysado oo ah in madaxa lagu hayo dadkaas noocaas ah ee danta umadda Soomaaliyeed ay wadi karaan oo ayagu aan dan ka dhex laheyn waa in aan ogaano oo meel noogu qornaadan, cidkasta oo danta umadda usoo istaagta oo muujisa inaysan dan ka dhex laheyn waa in umadda ogaado oo meel lagu qorto.”
Waxa kale oo xusid mudan intii uu Rooble ku jiray howlaha doorashooyinka uu halis galay amnigiisa, hase yeeshe u dhabar adeygay marxalad iyo culeys kasta oo kusoo wajahay dhameystirka doorashada.
Si kastaba, Go’aankii uu qaatay Rooble iyo dadaalka uu galiyay in lasoo afmeero doorashada Soomaaliya ee daahday, isaga oo aan wax dan gaar ah ka laheyn ayaa ah tallaabo dhib iyo naadir ku ah in lagu arko siyaasadda Soomaaliya ee daneysiga ah, waana mid bogaadin mudan.
Previous Ninkii caruurta laayay oo Xog cusub laga helay
Next Xubnihii ka tirsanaa boqortooyada Ingiriiska ee qaatay diinta Islaamka
Sawirro: Maxay ka wada-hadleen Sheekh Aadan Madoobe iyo Lafta Gareen?
15 mins ago Mohamoud
Xildhibaannada labada Aqal oo Manta markale kulan wadajir ah yeelanaya – Radio Muqdisho
WARKA SUBAX 8:00 AM (29-06-2022) – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
36 mins ago Mohamoud
Sawirro: Maxay ka wada-hadleen Sheekh Aadan Madoobe iyo Lafta Gareen? June 29, 2022
Barnaamijka Soomaalaay June 29, 2022
Xildhibaannada labada Aqal oo Manta markale kulan wadajir ah yeelanaya – Radio Muqdisho June 29, 2022
Tepco shares surge as Japan’s heat wave stretches power grid June 29, 2022
WARKA SUBAX 8:00 AM (29-06-2022) – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia June 29, 2022